Ny tsy fanajana UNWTO an'i Bahrain dia fanitsakitsahana ny Fepetran'ny Etika JIU
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny tsy fanajana UNWTO an'i Bahrain dia fanitsakitsahana ny Fepetran'ny Etika JIU
Ny sakafo sy ny divay amin'ny politika dia nanana andraikitra lehibe foana. Saingy mahamenatra ny fenitra andy ny fandikana ny lalàna mazava ataon'ny Vondron'ny Firenena Mikambana misahana ny fanaraha-maso ataon'ny Firenena Mikambana amin'ny fisakafoanana UNWTO. Izay firenena manatrika ny sakafo Alatsinainy alina dia tokony ho meloka amin'ity fikomiana ity.
Raha misy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Conseil Executive 35 an'ny UNWTO izay mamela ny solontenany na mpisolo toerana azy ireo hanatrika ny sakafo hariva alatsinainy hariva any Madrid anio, dia haseho izany ny tsy fanajana ny fanjakan'i Bahrain ary ny tontolo Arabo.
34 amin'ireo firenena 35 an'ny Birao Mpanatanteraka 113 ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) dia tsy maintsy mihetsika fa mangina fotsiny, mety miray tsikombakomba amin'ny Repoblikan'i Georgia sy UNWTO amin'ny famelana ny lalànan'ny Vondrom-piraisana iraisan'ny Firenena Mikambana ho voahitsakitsaka.
Ao amin'ny 2009 ny Joint Inspection Unit an'ny Firenena Mikambana ao Genève dia namoaka ny fisafidianana sy ny fepetra momba ny serivisy ho an'ny mpanatanteraka ao amin'ny rafitry ny fikambanana Firenena Mikambana.
Ny Joint Inspection Unit (JIU) dia namoaka fitsipika 13 tokony harahin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana ary izany dia tolo-kevitra 13.
Fomba fanao tsy etika
Paragrafy 7 dia milaza:
Ny rafitra mpanao lalàna / governemanta ao amin'ny fikambanan'ny rafitra Firenena Mikambana dia tokony manameloka sy mandrara ny fomba fanao tsy etika toy ny fampanantena, fankasitrahana, fanasana, fanomezana sns, natolotry ny mpilatsaka hofidina ho an'ny fahefana mpanatanteraka na ny governemanta mpanohana azy ireo mandritra ny
fampielezana fifidianana / fifidianana, ho valin'ny vato azo antoka azo antoka
eTurboNews tatitra momba ny andrana nataon'ny sekretera UNWTO Zurab mba hahazoana tombony amin'ny mpifaninana HE Shaikha Mai Al Khalifa amin'ny fomba tsy etika izay tsy misy kolikoly.
Tsy misy isalasalana, Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO dia manitsakitsaka mazava ny lalàna JIU izay neken'ny fireneny hanaja. Ny governemanta Georgia dia naniraka ny minisitry ny raharaham-bahiny handray ny sakafo hariva manan-danja ao anatin'ny fivorian'ny filankevitra ofisialy ofisialy ny alina talohan'ny fifidianana ho an'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO manaraka dia fanitsakitsahana mazava ny fomba fanao tsy etika. Ny sakafo hariva dia nampiana tamim-pahanginana tamina fandaharana ofisialy roa andro monja talohan'ny fivorian'ny filankevitry ny faran'ny herinandro, tsy nanome safidy ho an'i Bahrain hanohitra na hampidirina amina hetsika iray.
Ny tsindry politika napetrak'i Zeorzia dia ny firenena hifidy ny mpilatsaka hofidiny, noho izany ny minisitry ny raharaham-bahiny mampiantrano ity sakafo hariva ity dia tsy hamela ny fahareseny dia fahasahisahana tsy hay lazaina.
Inona ny Vondron'ny Inspection Joing an'ny Firenena Mikambana?
Ny Joint Inspection Unit (JIU) no hany rafitra fanaraha-maso ivelany tsy miankina an'ny rafitra Firenena Mikambana nomena andraikitra hanao tombana, fanaraha-maso ary fanadihadiana manerana ny rafitra.
Ny adidiny dia ny hijerena ireo olana manaparitaka ny fiampitana ary hiasa ho toy ny maso ivoho amin'ny fanovana manerana ny rafitry ny Firenena Mikambana. Ny JIU dia miasa mba hiantohana ny fitantanana sy ny fahombiazan'ny fitantanan-draharaha ary hampiroborobo ny fandrindrana bebe kokoa na eo amin'ireo masoivohon'ny Firenena Mikambana na amin'ireo orinasa mpanara-maso anatiny sy ivelany. Nandritra izay 50 taona lasa izay, ny Vondrona dia nanolo-tena hanampy ireo andrimpanjakana mpanao lalàna an'ny fikambanan'ny Firenena Mikambana marobe amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny fitantanana. JIU dia manome fanohanana eo amin'ny sehatry ny asan'ireo masoivoho ireo manoloana ny loharanon-karena olombelona, ​​ara-bola ary hafa. Ao amin'ny tatitra sy ny naotiny nataony, ny Unit dia mamantatra fomba fanao tsara indrindra, manolotra fehin-kevitra ary manamora ny fizarana vaovao manerana ireo fikambanana ao amin'ny rafitry ny Firenena Mikambana izay nandray ny statute-ny.
Ny Unit dia miasa manoloana ireo taova mpanao lalàna sy ny sekretariam-panjakana ataon'ireo masoivoho manam-pahaizana manokana sy fikambanana iraisam-pirenena hafa, ao anatin'ny rafitry ny Firenena Mikambana, izay nanaiky ny statut-ny. Ireo fikambanana ireo dia matetika antsoina hoe fikambanana mandray anjara amin'ny JIU. JIU dia manana fikambanana 28 mandray anjara hatramin'ny 2018 izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fomba fiasan'ny Unit.
Ny Unit dia miasa manoloana ireo taova mpanao lalàna sy ny sekretariam-panjakana ataon'ireo masoivoho manam-pahaizana manokana sy fikambanana iraisam-pirenena hafa, ao anatin'ny rafitry ny Firenena Mikambana, izay nanaiky ny statut-ny. Ireo fikambanana ireo dia matetika antsoina hoe fikambanana mandray anjara amin'ny JIU (PO). JIU dia manana fikambanana mandray anjara 28 izay mandray anjara lehibe amin'ny fomba fiasan'ny Unit.
Hampiroborobo ny fandrindrana bebe kokoa eo amin'ny fikambanan'ny rafitra Firenena Mikambana;
Tsindrio eto raha hovakiana ny antontan-taratasy, ny lalàna ary ny fitsipiky ny JIU